မောင်တော မြို့နယ်၊ ဝါးပိတ် ကျေးရွာ၏ ခြံဝင်းတစ်ခုအတွင်းမှ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ တူးဖော်ရရှိ | ngalone
← မောင်တောတောင်ပိုင်း နူရ်ရူလာရဲကင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှု ရဲတစ်ဦးကျ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
မောင်တောနယ်ခြားစောင့်တပ် ကွပ်ကဲရေးမှူးဟောင်းကို အရေးယူရန် အကျယ်ချုပ်ချ →
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← မောင်တောတောင်ပိုင်း နူရ်ရူလာရဲကင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှု ရဲတစ်ဦးကျ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ